यी हुन् तपाईंको आत्माले पुनर्जन्म लिएको संकेत दिने पाँच लक्षण - Internet Khabar
August 21, 2017 August 6, 2018 Internet Khabar
काठमाडौं : आत्मा र पुनर्जन्मको कुरा रहस्यमय छ। हिन्दू धर्ममा पुनर्जन्मको कल्पना गरिएको छ। यहाँ बताइएको पाँच लक्षण तपाईंले भोग्नुभएको छ भने तपाईंको आत्माले पहिले पनि जन्म लिइसकेको र अहिले तपाईंको पुनर्जन्म भएको थाहा पाउनुहुन्छ।
१. तपाईंलाई कुनै कुराले धेरै डर लाग्छ तर आश्चर्यजनक रूपमा त्यो डर तपाईंको वर्तमान जीवनमा भएको कुनै घटनाका कारण उत्पन्न भएको होइन । जस्तो, तपाईं उचाईं, पानी र आगोसँग डराउनुहुन्छ तर अहिलेको जीवनमा अग्लो ठाउँबाट लड्नुभएको छैन, पानीमा डुब्नुभएको छैन वा आगोमा डढ्नुभएको छैन र पनि डर लाग्छ भने तपाईंको पुरानो जन्मको संस्कार हो।
२. तपाईंलाई प्रायः एउटै सपना बारम्बार आइरहन्छ भने यो पूर्वजन्मको कारणले हुन सक्छ । सपनामा देखिएका मानिस तपाईंले चिन्नुभएको जस्तो लाग्छ, तपाईं तिनीहरूलाई कहाँ देखेको हो याद गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईंले उनीहरूलाई कहीँ त अवश्यै देख्नुभएको जस्तो लाग्छ । यी मानिसहरू तपाईंको पूर्वजन्मसँग जोडिएका हुन सक्छन्। पूर्वजन्ममा उनीहरू तपाईंका सहयोगी हुन सक्छन् वा अत्यन्त नजिकका मानिस हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरू सपनामा बारम्बार आउँछन्।
३. तपाईं पहिलोचोटि कसैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ तर भेट्नेबित्तिकै तपाईंलाई त्यो मान्छेलाई कतै भेटेको जस्तो लाग्छ । अचम्मको आफ्नोपन उसप्रति महसूस हुन्छ । खासमा पछिल्ला केही जन्ममा उक्त व्यक्तिसँग तपाईंको राम्रो सम्बन्ध रहेको हुनसक्छ।
४. तपाईं कुनै कुरामा भावनात्मक रूपले जोडिनुहुन्छ । जस्तै, अनाथ बच्चा, बूढा, अपांग वा माग्नेहरूप्रति दयाभाव पलाउने । त्यस्तालाई देख्नेबित्तिकै तपाईंको मनमा दया र सहानुभूतिको सागर उर्लेर आउँछ । यसको अर्थ हो, तपाईं पूर्वजन्ममा यस्ता परिस्थिति बेहोर्न बाध्य हुनुभएको थियो । त्यसैले त तपाईंमा यिनीहरूप्रति दयाभाव छ । तपाईं पहिले पनि जन्म लिइसक्नुभएको प्रमाण हो यो।
५. तपाईंलाई कुनै खराब कुरा हुन लागेको पहिल्यै थाहा हुन्छ र त्यसैले डराउनुहुन्छ । अनि तपाईं यसलाई आफ्नो मनको भ्रम पनि भन्न सक्नुहुन्न किनकि यो डर प्रायः वा सधैं सत्य हुन पुग्छ । यो पनि पूर्वजन्मकै संस्कारको कमाल हो।
उमेर बढ्दै जाँदा परिपक्वता आउँदै जान्छ । तपाईंको शरीरमा एक प्रौढ आत्मा छ जसले पहिला पनि धेरैचोटि जन्म लिइसकेको छ । त्यसैले आफ्ना अनुभवहरूका आधारमा वर्तमानमा हुने घटनाक्रमका साथै भविष्यमा हुनसक्ने घटनालाई पनि तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।
डन्डीफोरले सतायो, यस्ता छन् हटाउने ७ घरेलु उपाय
November 13, 2017 July 28, 2018